musha Africa Ahmed Lawan Kuburitswa Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yakakwana yeNyika Yezvematongerwo enyika eNigeria inonyanya kuzivikanwa se “Lawan". Yedu shanduro yeAhmed Lawan's Biography uye Childhood Story inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wose anoziva ndiye mumwe wevamiriri vemitemo veNigeria vagara kwenguva refu. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Ahmed Lawan's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Ahmed Lawan Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Kutanga kubva, Ahmed Ibrahim Lawan akazvarwa musi we 12th waJanuary 1959 kuGuhua muNyika yeJobe Nigeria. Akazvarwa kuna amai vake, Hajia Halima Ali uye kuna baba vake, Late Mallam Ibrahim Lawan.
Ahmed Lawan akaberekerwa vabereki vanozivikanwa zvishoma nezvake.
Ahmed Lawan Family Origin:
Nyika yeNigeria yenyika yeFulani / Hausa neNorth African roots yakakurira paakaberekerwa muGuhuahua kwaakakura pamwe chete nehama nehanzvadzi dzisinganyanyi kuzivikanwa nezvazvo.
Kukura panzvimbo yake yekuberekerwa (Gashua) iyo inozivikanwa nehuwandu hwekurima uye hwekubata hove, vechiduku vechiLawan vaive vakakurumbira kubva kune vezera rake nerudo rwake rwekuwana ruzivo.
Ahmed Lawan akakurira mudhorobha rake muGashua.
Kunyangwe iye panguva iyoyo mudiki aiziva kugara zvakanaka pamwe neshamwari dzake uye kutora chikamu mukutamba zviitiko zvevacheche, kudzidza kwakatora nzvimbo yepakati muhupenyu hwake hwepakutanga uye kumuona kuburikidza nehucheche hunofadza kusvika kune tariro yekuyaruka.
Ahmed Lawan Dzidzo:
Lawan aiva nechikoro chake chekutanga kana dzidzo yepamusoro paSabon Gari Primary School Gashua. Paakapedza chikoro kubva kuchikoro, akaendesa kuHarare Secondary School Gashua kuchikoro chekondari kana kuchikoro chesekondari.
Ahmed Lawan chibereko chekutanga chikoro chepamutemo muNigeria.
Kwakazotevera kuita kwedzidzo akaona Lawan achiwana degree rake rekutanga muGeography kubva kuYunivhesiti yeMaiduguri, Borno State.
Kuve padanho raifungidzirwa nevazhinji kuve yepamusoro yekuwana zvedzidzo, Lawan anga asingagutsikane asi akagadzirira zviitwa zvikuru.
Ahmed Lawan Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Kuita kwaLawan kwakanakisa muhunhu uye nevadzidzi, pamwe nekutenda kwake mukudzidza kwehupenyu hwese, zvakatungamira iyo University yeMaiduguri kuti imupe basa semubatsiri akapedza kudzidza mushure mekupedza kudzidza mugore ra1984.
Ahmed Lawan basa rekutanga aishanda semudzidzisi anobatsira mudzidzisi paYunivhesiti yeMaiduguri.
Asingazorore pamakwashu ake, iye Asingagutsikane ane makore makumi maviri nemashanu anoshanda basa rakanakisa pachikoro nekuwana dhipuroma rekupedza kudzidza muLand Survey kuAhmadu Bello University, Zaria.
Akaenderera mberi kutora maMasters (MSc) uye Doctor of Philosophy (PhD) madhigirii muRemote Sensing uye Geographic Information System (GIS) kubva kuYunivhesiti yeCranfield, United Kingdom.
Ahmed Lawan Biography - Rwendo rweMukurumbira:
Sezvo rwendo rweLawan rwakabudirira muAcademia ruchienderera mberi, akazova munhu anonzwisisika chaizvo aigara achiziva nezvezvakange zvakamukomberedza, zvimwe zvacho zvaityisa uye zvisingaenderane nekodhi yake yekutonga yekushandira vanhu.
Nokudaro, Lawan akaita sarudzo dzake mune zvematongerwo enyika ehurumende nechinangwa chokuzvipira kune rimwe basa rakakwirira kuvanhu, zvikurukuru kubudirira kwehupenyu hwevanhu vanotambura munharaunda.
Kunatsiridzwa kwehupenyu nemasevhisi kune vanhu yaive hwaro hwakavakirwa Ahmed Lawan basa rake rezvematongerwo enyika.
Ahmed Lawan Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Kufanana nevanhu vezvematongerwo enyika panguva iyoyo, Lawan akatanga mudiki muna 1988 nekushanda semapiyona mutevedzeri wasachigaro weAll Peoples Party (APP) mudunhu reYobe.
Iye akazoshanda seMunyori weElectoral Committee yeAPP National Convention muAbuja asati akwikwidza nekukunda chigaro muNigeria yeFederal House yeVamiriri, senhengo inomiririra Bade / Jakusko Federal Constituency mu1999.
Ainge apedza makore angangoita masere muFederal House yeVamiririri, akakwikwidza akahwina sarudzo muna 8 muSeneti yeFederal Republic yeNigeria, semumiriri weYobe North Senatorial District.
Paaiva paSeneti, Lawan akashanda mumatare akasiyana siyana. Akaramba ari nhengo yakasarudzika yeSeneti kweanopfuura makore gumi uye akasarudzwa semutungamiriri wedare repfumbamwe musi wa9 Chikumi 11.
Ahmed Lawan akapika seMutungamiri we9th Senate musi wa11 Chikumi 2019.
Ahmed Lawan Mudzimai:
Ahmed Lawan akaroora panguva yekunyora iyi bio. Tinokuunzira chokwadi nezve nhoroondo yake yekufambidzana uye hupenyu hwemhuri. Kutanga, hapana marekodhi emusikana wemugadziri wemutemo (s) vasati varoora.
Kunyangwe zvakadaro, zvakakosha kuziva kuti iye akaroora nevanakomana nevanasikana uye anogona kunge ane mudzimai anopfuura mumwe achifunga nezvekuti VaMuslim vari kuchamhembe kweNigeria, kunyanya vakuru vevanhu vanogona kuva neimba yemarika.
Ahmed Lawan Hupenyu Hwemhuri:
Ahmed Lawan anorumbidzwa kubva kumhuri yepakati-kati yemhuri. Tinokuudza chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve Baba naAmai Ahmed Lawan:
Lawan akaberekwa uye akarererwa nevabereki vekuchamhembe kweNigerian extraction.
Amai vake, Hajia Halima Ali nababa vake vanononoka, Mallam Ibrahim Lawan vaive nhengo dzakakosha dzemunharaunda mavo uye vanoda dzidzo.
Naizvozvo haisi roketi sainzi iyo Lawan akakurira achishandisa mikana yedzidzo yakajairika uye parizvino anokohwa mabhenefiti ayo.
Nezvehama dzaAhmed Lawan:
Pakave pasina kutaurwa kwakatendeka kwehama nehanzvadzi dzaLawan mukati memakumi emakore-basa rake rezvemutemo.
Zvisineyi, hapana mutemo unorambidza mukana wekuti iye chibereko chebarika uye nekuwedzera, hama kune vakawanda.
About Ahmed Lawan's Hama:
Kure kubva kumhuri yepedyo yaLawan, Mudiki anozivikanwa nezveasekuru nasekuru vake pamwe nasekuru nasekuru nasekuru vake.
Saizvozvowo, pakange pasina kutaurwa nezve babamunini vaLawan, vanatete, babamunini uye vazukuru nepo hama dzake dzisina kuzivikanwa muzviitiko zvinozivikanwa zveupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino.
Ahmed Lawan Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Ahmed Lawan afare? Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kugadzirwa kwehunhu hwake kukubatsira iwe kuti uve nemufananidzo uzere wake. Kutanga, Lawan's persona musanganiswa weCapricorn Zodiac maitiro.
Iye anoshanda, anoongorora, akarongeka, anozvibata uye haatomboburitsa ruzivo rune hanya nehupenyu hwake hwega uye hwakavanzika.
Lawan ane zvishoma zvekunakidzwa uye zvekuvaraidza zvinosanganisira kuverenga, kuita nharo, kufamba pamwe nekushandisa nguva yakanaka neshamwari dzake nemhuri.
Ahmed Lawan anoda kupinda mumakakatanwa anovandudza kufunga kwake kwakasimba.
Ahmed Lawan Mararamiro:
Ahmed Lawan mupfumi wezvematongerwo enyika akapfuma kwazvo uyo kukosha kwake kuri kuongororwa panguva yekunyora iyi bio.
Kwakatangira hupfumi hwake kunonyanya kubva pamiromo inonwisa mvura yaakatambira semugadziri wemutemo kwemakumi emakore.
Nekudaro, ane dzimba dzoumbozha kudhorobha rake muYobe mudunhu pamwe nemuguta guru reNigeria reAbuja. Zvichakadaro zvishoma zvinozivikanwa nezve ake mota kuunganidzwa sezvo iye asina kupihwa kuratidza hupfumi hwake.
Ahmed Lawan ari pakati pevakapfuma kwazvo muNigeria.
Ahmed Lawan Untold Chokwadi:
Kuvhara nyaya yedu yeAlbert Lawan Childhood uye biography, tinopa zvishoma zvinyatsozivikanwa izvo zvisingawanzobatanidzi muhupenyu hwake.
Ahmed Lawan anotsanangura seMuslim uye ave akabatana nechitendero kubva paudiki hwake mazuva.
Akanga aine National Youth Service NYSC kuBenue State Nigeria.
Akave akapinda zvidzidzo zvakakwirira mumarudzi akawanda. Zvinosanganisira Oxford Strategic Leadership (OSLP) Program (SAID Business School University of Oxford), 3rd Westminster Workshop paKomiti yeZvipatimendi Zvevanhu (House of Parliament, London), Professional Development Course paCanada Taxation System (Carleton University), nezvimwewo.
Lawan yakagamuchira zvikwereti zvakasiyana zvinosanganisira Mutungamiriri weDare reNiger (CON); iyo Sardauna Legendary Pirato yeZvakanaka Muutungamiri Mutambo neHutungamiri uye Muenzaniso Wokutanga weNigeria neFellow of the Institute for Government Research uye Leadership Technology (2012), nezvimwewo.
Ahmed Lawan Biography Vhidhiyo Chidimbu:
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Ahmed Lawan Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!